Mushaharka iyo cashuurta | Samfunnskunnskap.no
Norwey waa caadi in mushahar sannad laga hadlo. Celceliska mushaharka sannad ee dadka shaqo buuxda ka shaqeeyaa waa qiyaastii 500 000 koroone sannadkii. Haweenku waxay celcelis ahaan helaan boqolkiiba 86,4 inta raggu helaan. Eeg bogaga SSB; Mushahar, dhammaan shaqaalaha. Se SSBs nettside: Lønn, alle ansatte.
Waa caadi in mushaharka taariikh go’an bishii la qaato. Mushaharka saafiga ah si toos ah ayuu koontada shaqaalaha ugu dhacaa. Sidoo kale shaqaaleha waxa la siiyaa cadeyn mushahar oo muujineysa inta uu mushahar shaqaystay, iyo inta uu shaqobixiyuhu cashuur ka gooyey.
Waa waajib saaran shaqobixiyeha inuu cashuur ka gooyo mushaharka buuxa ee shaqaalaha inta aanuu mushaharka bixin. Shaqobixiyuhu wuxuu lacagta cashuurta siinayaa dawladda.
Moodeelka bulsho ee noorwiijigu wuxuu ku xidhan yahay in dadweynuhu bixiyaan cashuur iyo khaidmado. Cashuuraha iyo khidmaduhu waxay maalgeliyaan kaalmooyinkeena bulsho.
Dhammaan shaqaalaha Norwey waxay cashuur siiyaan degmada ay deganyahiin iyo dawladda. Shaqobisiyeyaashu waxay sidoo kale cashuur siiyaan degmada iyo dawladda.
Inta ay cashuurta uu shaqaale kastaa bixiyaa le’eg tahay wey kala duwan tahay. Guud ahaan waxaan odhan karaa marba sida uu dakhliga qofku u sareeyo ayey cashuurta uu bixiyaa u sareysaa. Laakiin khidmadaha tusaale ahaan dulsaarka inta u sarraysa ee uu la bixinayo amaahda, inta aan ku bixino ilaalinta carruurta, ama khidmada safarka ee shaqadu inta ay tahay, ayaa go’aaminaya marka cashuurta la iska jarayo. Celcelis ahaan qofka shaqaalaha ahi wuxuu boqolkiiba 25 cashuur ka bixiyaa mushaharkiisa buuxa.
Qof kasta oo shaqeeya, waa inuu haystaa kaarka cashuurta. Kaarka cashuurta waxaad ka balansan kartaa halkan Skatteetaten.
Dhammaan dadka qaata mushaar waxay helayaan warqadda mushaarka. Warqaddan waxay cadeynaysaa inaad canshuur bixisay.
Waa mushaarkaaaga inta aan cashuurta, lacagta daryeelka hawlgebka iyo waxyaale kale laga jarin.
Waa mushaarkaaga markii laga jaro canshuurta, lacagta daryeelka hawlgebka iyo waxyaalaha kale.